HarmonyOS, hurongwa hwaHuawei huchavakirwa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kwenguva yakati zvino, makuhwa (kana kupfuura runyerekupe) anga achitenderera anotitaurira nezveHuawei sisitimu inoshanda kunze kweiyo Android. Chitsauko chekutanga cheiyi sipo opera yakanyorwa naDonald Trump, purezidhendi weUnited States, paakatsvaga hofori yekuAsia uye kambani haina kukwanisa kuwedzera masevhisi eGoogle kumidziyo yayo. Panguva iyoyo, Huawei akatanga kuongorora dzimwe nzira uye nhasi vaburitsa yavanosarudza: inonzi HarmonyOS Uye, pakutanga, zvinonzwika zvisina kunaka zvachose.
Vakazviita mu HDC2019, uko vataura zvinhu zvinonakidza kwazvo. Ndotangira papi? Ini ndinofunga chinhu chekutanga kutaura ndechekuti, senge Android, HarmonyOS ichave Linux yakavakirwa. Iye CEO weHuawei Mobile atiudzawo kuti zvichave open source, izvo zvinozoguma mukuvandudza kuri nani uye nekukurumidza uye chero mushandisi ane ruzivo rwakakosha anokwanisa kubatsira kugadzirisa chero madhiragi anowanikwa. Kana zvese izvi zvichiita sezvishoma kwauri, kuchine zvimwe zvinonakidza zvinhu.
1 HarmonyOS ichave ichiwanikwa pane ese marudzi emidziyo akachenjera
2 Iyo isingaremi sisitimu iyo inoshanda pane zviwanikwa-mashoma zvigadzirwa
HarmonyOS ichave ichiwanikwa pane ese marudzi emidziyo akachenjera
HarmonyOS ichave pamhando dzese dzemidziyo yekuchenjera semafoni, mapiritsi, mota, wachi uye kunyange makomputa. Yakave yakagadzirirwa nepfungwa yekuti inoshanda pane chero mhando kifaa, zvisinei nehukuru uye chimiro cheiyo skrini. Iyo inoshanda sisitimu ichaenderana neHTML5 kunyorera uye vanoona kuti, kuve yakavakirwa paLinux nenzira yakafanana neiyo Android iri, ichakwanisa kumhanyisa kunyorera kubva kuGoogle's mobile operating system.
Chirevo chaHuawei chichava chakachengeteka kupfuura cheGoogle. Android inogona kupa superuser kana midzi mvumo kune ekunze masevhisi uye ichi chinhu chisingaitike muHarmonyOS. Iyo yekushandisa sisitimu ichave yakavakirwa pane a microkernel chimiro, zvinoreva kuti mhando yega yega yechigadzirwa inoshandisa kernel yayo yakagadzirirwa kushanda pane iyo mhando yechigadzirwa. Izvi zvinoreva kuti, semuenzaniso, iyo musimboti inoshandiswa ne smartwatch ichave yakati siyanei pane iya inoshandiswa netablet.
Iyo isingaremi sisitimu iyo inoshanda pane zviwanikwa-mashoma zvigadzirwa
Sekureva kwekambani, HarmonyOS inzira isingaremi yekushandisa iyo inogona kushanda pane zviwanikwa-zvisingashome zvishandiso, chimwe chinhu chakakosha kana tichifunga kuti ivo vanoda kuti chishande, semuenzaniso, mumidziyo idiki semawadhi akangwara. Uye ndezvekuti, kubva pane izvo zvinoita uye kunyangwe vachizviramba, Huawei iri kugadzirira yayo yega ecosystem iyo inokwikwidza Android kana iyo Apple ecosystem. Zvepamutemo, chinangwa chayo ndechekuenderera mberi nekushandisa Android panhare mbozha, asi isu munguva pfupi tinoona michina ine yayo nyowani yekushandisa system
Remangwana harina chokwadi. Kune rimwe divi, iyo kambani inoti yakagadzirira kutama KuHarmonyOS chero nguva. Kune rimwe divi, hazvigoneke kuti usafunge nezveramangwana umo HarmonyOS iri kubudirira uye inozadzikisa kukosha kwayo. Isuwo tinofanirwa kumirira kuti tione kuti iyo desktop vhezheni yeiyo ichangoburitswa sisitimu yekushanda yaizotaridzika sei. Kune mibvunzo yakawanda ine mhinduro dzichawanikwa mumwedzi iri kuuya.
Trump inobvisa veto uye inobvumidza kutengesa kweUS kuHuawei
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » HarmonyOS, Huawei inoshanda sisitimu yakavakirwa paLinux kutarisa kune ramangwana
Steam Tamba: iyo nyowani yekuvandudza iri kunze neProton 4.11-2